Shirka Wadatashiga Qaran oo hal garab noqday (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shirka Wadatashiga Qaran oo hal garab noqday (SAWIRRO)
Shirka Wadatashiga Qaran oo hal garab noqday (SAWIRRO)
Shirkii wadaashiga qaran ee shalay uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka furay Xerada Afisyooni ayaa waxaa si buuxdo ugu gacan-seyray ka qaybgalkiisa Madaxweyne-yaasha Puntland iyo Jubbaland.
Shirka oo maalintii 2aad galay ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxda Dowladda Federaalka, Madaxweyne-yaasha Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, waxaana maanta warbixin looga dhageystay Guddiga Farsamada ee arrimaha doorashooyinka.
Kusimaha Guddoomiyaha Guddiga Farsamada ahna Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokor Dubbe ayaa ka warbixiyay qorshaha mideysan, ee ay ka soo saareen Guddigu shirkii talo soojeedinta ee bartamihii bishii February ka qabsoomay Magaalada Baydhabo.
Warbixinta ayaa Madaxda lagula wadaagay nuxurka talo soojeedintooda ku aaddan doorashooyinka dalka, halbeegyada iyo jaantuska muhiimka u ah qorshaha qaran ee qabsoomidda doorashada.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ayaana boggaadiyay shaqada Guddiga Farsmada.
Dhinacyada uu shirka uga socdo Xerada Xalane ayaa loo arkaa Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, kuwooda xiriirka dhow la leh Villa Somalia, taasoo aanu caalamku taageeri doonin heshiis walbaa oo lagu gaaro shirkooda, bacdamaa ay marar badan ku celceliyeen inaanay taageeri doonin doorasho hal dhinac ah.
Qaramada Midoobey ayaa xalay ku baaqday in la sii wado kulamada aan tooska ahayn, si is afgarad looga gaaro doorashada, shirka looga hadlayana looga wada qaybgalo.
Previous articleToogasho dad lagu dilay oo ka dhacday Deegaanka Ceelasha Biyaha
Next articleMucaaradka oo shir uga furmay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)